Ogaden News Agency (ONA) – Gud.Ku-xigeenka JWXO oo Kala Qaybgalay Kulan ay Yeesheen Xubanah Golaha Dhexe ee JWXO ee Gobolka Pacifica
Gud.Ku-xigeenka JWXO oo Kala Qaybgalay Kulan ay Yeesheen Xubanah Golaha Dhexe ee JWXO ee Gobolka Pacifica
Posted by ONA Admin	/ November 3, 2014
Ayada oo laga duulayo qorsheyaasha guud ee hirgelinta halganka gobonimadoonka Ogadenya iyo go’aamadii Kalfadhigii Golaha Dhexe ee Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogadenya (JWXO) ayay Xubnaha G/Dhexe eek u sugan Gobolka Pacific kulan muhiim ah yeesheen. Waxaa kulanka lagu furay ayado Quraanka kariimka ah iyo wacdi munaasabada ku haboon oo Mudne Adam Ibrahim uu soo jeediyay.
Kadib waxaa kulanka furay Gudoomiye Xigeenka JWXO Mudane Maxamed Ismaciil Cumar oo faah faahiyay ajendaha kulanka oo ahayd sidii loo horumarin lahaa halganka iyo kaalinta ay X/Golaha Dhexe ka qaadanayaan taageerada halganka ee ka socda Gobolka Pacificga. Warbixino iyo xog is waydaarsi dhinacyo badan ah kadib waxaa kulanka lagu qiimeeyay halganka Shacabka Somalida Ogadenya ee JWXO hogaaminayso iyo guud ahaan xaaladda Geeska Afrika.
Waxaa laysla qiray in halganku dhinac kasta meel fiican marayo taas oo walaahaw iyo wel-wel badan ku ridday cadowga gumeysatada Ethiopia iyo gumeysi kalkaalka uu ku adeegto. Waxaa sidoo kale la qiimeeyay xaalada gumaysiga Itobiua iyadoo la’isla qiray inay gumeysatada Ethiopia ku sugan tahay marxalo kala dhaqaaq ah oo gumeysigu yahay gabal sii dhacaya loona baahan yahay in dabada layska sii raaciyo. Waxaa ;a qiimeeyay inuusan xukun laga dambeeyo ka jirin Addis Ababa oo ay tahay nin tooxsi oo dalka ay Genenaralda Tigreegu u taliyaan.
Kadib, falanqayn badan iyo qiimayn xaaladaha ku gadaaman halgank iyo duruufta maanta la marayo waxaa kulanka ka soo baxay go’aamo dhaxal gal ah waxayna masuuliyiinta Kulanku ugu baaqayaan Jaaliyadaha Ogadenya ee dibadaha ka hawl gala gaar ahaan kuwa ku nool Gobolka Pacificga inay xoojiyaan midnimadooda iyo isku duubnidooda kana gaashaantaan shirqoolada cadowga iyo cadow kalkaalka ee ku salaysan qaybi oo xukun.
Waxaa hubaal ah in Guusha uu shacabka Somalida Ogadenya helayo insha Allaah, waxaana shacabka lagu booriyey inay si weyn ula socdaan dhaqdhaqaaqa cadowga tabarta iyo garaadka daran lana fashiliyo ujeeddooyinkiisa guracan.